DVDyadaada DVD-gaaga ugala bixi MP4 si dhakhso leh oo fudud WinX DVD Ripper | Wararka Gadget
Ku dheji DVD-yadaada si MP4 si dhakhso leh oo fudud WinX DVD Ripper
Qolka Ignatius | | Aplicaciones, Sawir iyo dhawaq
Sannado ka hor, markii kaamirooyinka dijitaalka ahi ay ahaayeen habka caadiga ah ee lagu duubo fiidiyowyada, oo aan ahayn taleefannada casriga ah sida ay maanta yihiin, in badan oo naga mid ah ayaa dhammaaday u wareejinta fiidiyowyada la duubay DVD si ay u sii dheeraadaan oo ay u awoodaan inay ku ciyaaraan meel kasta.
Si kastaba ha noqotee, sida kamaradaha dijital ah, duubista fiidiyowyada iyo sawir qaadista, labadaba waa la waayey iyadoo loo daneynayo taleefannada casriga ah, inbadan ayaa ah dadka isticmaala ha sii wadin in aad cajaladahaaga u beddesho DVD oo waxay ku kaydsadaan oo keliya dirawaladooda adag ama adeegyada kaydinta daruuraha.
Haddii aad horey u rinjiyeysay wax yar oo cirro cirro ah, ama aad ku jirto howsha, waxay u badan tahay inaadan haysan kaliya uruurinta filimada DVD, laakiin waxaad sidoo kale yeelan doontaa dhowr fiidiyow oo duug ah oo qaab DVD ah, fiidiyowyo waxaad waligaa rabtay inaad gacanta ku haysato in dib loo eego iyaga oo aan la isticmaalin DVD player, qalab ah, in dhawr sano, loo arkaayey wax ka mid ah hore.
Si ka duwan vinyl, qaab aan waligeen naga tagin Intaa waxaa sii dheer, sanadihii la soo dhaafay waxay ku soo noqotay inay yeelato dhalinyaro labaad, qaabka DVD-ga ayaa la xukumayaa inuu baaba'o, sidaa darteed waxaa si weyn lagula talinayaa inaan bilowno inaan u wareejino fiidiyowyadeena ku saabsan qaabkan qaab muuqaal ah dijitaal.
Mid ka mid ah codsiyada ugu wanaagsan ee hadda laga heli karo suuqa u beddel DVD-yada MP4 ama ISO image es WinX DVD Ripper. Waxaa jira codsiyo kale oo sidoo kale sameeya noocan beddelka, laakiin kala duwanaanta ay tani na siiso lagama heli doono mid kale. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan wax kasta oo codsigan na siiyo, waxaan kugu casuumayaa inaad sii wadato akhriska.
1 Hel rukhsad gabi ahaanba bilaash ah
2 Waa maxay sababta aan ugu bedeleyno DVD-keena MP4 ama ISO image
2.1 Kaydso si aad ugu kaydiso meel kasta
2.2 Beddelaan DVD in MP4
2.3 Nuqul DVD-yadaada USB-ga
2.4 Ku ciyaar DVD-yadaada Plex iyo Kodi
3 Waa maxay sababta WinX DVD Ripper ay tahay ikhtiyaarka ugu fiican ee nuqulada DVD-yadayada laga sameeyo
3.1 Nuqullo ka sameyso wixii DVD ah
3.2 Nuqul isku mid ah qaabka ISO
3.3 Ugu dhaqsaha badan dhamaan
4 WinX DVD Ripper, codsiga ugu badan
5 Sida loo Beddelo DVD-ga MP4 / ISO ee loo yaqaan WinX DVD Ripper
Hel rukhsad gabi ahaanba bilaash ah
Wiilasha WinX DVD Ripper wuxuu bixiyaa 500 shati maalin kasta, ruqsadaha taas noo oggolow inaan adeegsanno mid kasta oo ka mid ah howlaha dalabka. Kaliya laakiin waa in noocani uusan heli doonin cusbooneysiin cusub.
Waa maxay sababta aan ugu bedeleyno DVD-keena MP4 ama ISO image
Kaydso si aad ugu kaydiso meel kasta
Way sii adkaaneysaa ka raadi DVD-yada dukaamada oo kolba sannadaha ka dambeeya, way ka sii dhib badnaan doontaa laakiin sidoo kale cutubyada akhriska ee qaabkan sidoo kale waxay bilaabeen inay fiicnaadaan. Laakiin intaas kaliya maahan, qaabka jireed wuxuu u nugul yahay waxyeellada, taasoo u horseedda luminta waxyaabaha aan laga soo kaban karin.
U beddel mawduucyadeena qaab dijitaal ah wuxuu noo ogolaanayaa inaan markasta gacanta ku hayno oo ay hayaan nuqulo badan oo isku mid ah (gaar ahaan fiidiyowyadii hore ee qoyska). Fiidiyowyada qaab qaab dijitaal ah, waxaan ku keydin karnaa waddo kasta oo adag, pendrive si aan ula wadaagno, adeegyada kaydinta, NAS ... ku habboonaanta oo aan shaki ku jirin hadda oo aadan ku raaxeysanayn ururintaada filimada qoyska iyo fiidiyowyada.
Beddelaan DVD in MP4
WinX DVD Ripper wuxuu noo ogolaanayaa inaan DVD-yadayada u badalno qaab MP4, qaab la jaan qaada dhammaan qalabka elektarooniga ah hadda laga heli karo suuqa, laga bilaabo taleefannada casriga ah illaa kombuyuutarrada iyo sidoo kale qunsuliyadaha jiil kasta.
Nuqul DVD-yadaada USB-ga
Ku raaxeysiga DVD-ga telefishankeennu waa geedi socod aad u fudud oo aan lahayn aaladda DVD-ga ee isku xidhan, maaddaama ay u mahadsan tahay WinX DVD Ripper, waan awoodnaa ciyaaro faylka loo rogay qaab kasta oo ka imanaya USB-ga telefishankeenna.
WinX DVD Ripper waxay noo ogolaaneysaa inaan u beddelno DVD-yada qaab kasta oo aan u baahanahay. Muhiim ma aha in la ogaado qaabka qalabku u taageerayo halka loo socdo, maadaama arjigu na siinayo tiro badan oo xulashooyin ah oo nagu hagaya talaabo talaabo ah si aan u fulino hawsha.
Ku ciyaar DVD-yadaada Plex iyo Kodi
Mid ka mid ah faa'iidooyinka haysashada maktabaddeenna oo qaab dijitaal ah na siineysa ayaa ah inaan mar walba gacanta ku heyn karno, iyadoo loo marayo NAS ama si toos ah waddoheena adag si, Plex ama Kodi, aan u awoodno ku ciyaaro waxyaabaha ku jira qalab kasta barnaamijyadan, xitaa haddii aysan ku jirin isla shabakadda Wi-Fi.
Waa maxay sababta WinX DVD Ripper ay tahay ikhtiyaarka ugu fiican ee nuqulada DVD-yadayada laga sameeyo
Markii hore, waxaan ka faallooday in xalka aan ku hayno WinX DVD Ripper uu yahay kan ugu wanaagsan ee hadda suuqa yaala waxaanan kashifay sababo kala duwan. Laakiin Waa maxay sababta ugu fiican dhammaan?
Nuqullo ka sameyso wixii DVD ah
WinX DVD waa la jaan qaada dhammaan DVD-yada ku jira suuqa, oo ay ku jiraan kuwii ugu dambeeyay ee laga sii daayay gobol kasta, laakiin sidoo kale, waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan dib u soo ceshano DVD-yada burburay iyo kuwa khaladaadka aqrinta leh.
Nuqul isku mid ah qaabka ISO
Haddii aadan rabin inaad u beddesho DVD-ga qaab MP4 ah, oo leh WinX DVD Ripper waxaad ku samayn kartaa nuqul isku mid ah qaab ISO ah markasta hayso DVD-yada dheeraadka ah mana ahan kaliya filimka. Nuqul ka mid ah qaabka ISO ayaa si sax ah isugu mid ah oo aan ka heli karno DVD-ga muuqaalka ah, iyadoo aan lumin tayada.
Ugu dhaqsaha badan dhamaan
Si ka duwan barnaamijyada kale ee noo oggolaanaya inaan DVDyadeenna ugu beddelno qaab dijitaal ah, WinX DVD Ripper wuxuu adeegsadaa sawirrada aaladdayada sidaa darteed hawshu aad ayey u dhakhso badan tahay (illaa 47% ka dhakhso badan codsiyada kale) iyada oo aan lumin tayada waqti kasta.
WinX DVD Ripper, codsiga ugu badan
WinX DVD Ripper waa qalab aad u fiican oo loogu badalo maktabaddeena qaab DVD ah qaab dijitaal ah, sidoo kale MP4, HEVC, MPG, WMV, AVC, AVI, MOV ...
Intaa waxaa dheer, waxay noo ogolaaneysaa tafatir DVD-yada in aan u beddeleyno in aan isku shaandheynno sawirka, aan gooyno, ku darno cinwaanno hoose, aan hagaajino xuduudaha midabka ...
Ku duub DVD-yada aan jecel nahay in lagu ciyaaro iPhone, iPad, Xbox, PS4… Waa mid aad u dhakhso badan oo sahlan oo leh WinX DVD Ripper.
Sida loo Beddelo DVD-ga MP4 / ISO ee loo yaqaan WinX DVD Ripper
Nidaamka loogu badalayo DVD-ga MP4 ama qaabka ISO waa mid aad u fudud oo umuuqda mid cajiib ah. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan habka loogu beddelayo DVD-keena ururinta qaab dijitaal ah, ka dib ayaan ku tusi doonaa adiga tallaabooyinka la raacayo markaa waad arki kartaa sida ay u fududahay.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan gelino DVD-ga si loogu beddelo qaybta akhristaha ee kombuyuutarkayaga. App si toos ah ku shuban doonaa content disc ah iyo dhammaanteen xulashooyinka beddelka ee ay na siiso.
Marka xigta, waa inaan dooranaa haddii aan rabno sameyso nuqul qaab ISO ah DVD-ga (DVD Backup) ama hadaan rabno u rog qaab la jaan qaadi kara oo leh aaladaha Apple, Android, Xbox, PlayStarion. Markaan dooranay qaabka aan dooneyno inaan DVD u badalno, guji RUN oo sug inta howshu dhamaaneyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Aplicaciones » Ku dheji DVD-yadaada si MP4 si dhakhso leh oo fudud WinX DVD Ripper
SPC Gravity Octacore, kiniin dhaqaale leh 4G [Falanqeyn]
Tronsmart wuxuu soo bandhigayaa Apollo Bold, samaacadaha sameecadaha leh oo leh buuq firfircoon oo baajinta dhawaaqa